Mitsubishi Fuso လုပ်ငန်းသုံးယဉ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Porter II (9)
Pearl white Mitsubishi Fuso Truck 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...
Mitsubishi Fuso Box Truck 2009
Pearl white Mitsubishi Fuso Box Truck 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
Mitsubishi Fuso (BoxTruck, 12Wheels)	Price	-	490 L	FS54JVZ- , 2003Model, 12880CC, 12Wheels, 13.9 Tons, 406000KM	Car No. -	2N /…. (YGN)	*** ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်...
Price $	သိန်း230 Brand name	MITSUBISHI Model FUSO CANTER model year	2012 custom grade Engine အမျိုးအစား	4B10 3000cc Gear အမျိုးအစား	SEMI-AUTO (AUTO+MANUAL) License အမျိုးအစား	MDY/BGO ကြိုက်နှ...
Price $	190သိန်း Brand name	MITSUBISHI Model FUSO CANTER model year	2011 Engine အမျိုးအစား	4B10 3000cc Gear အမျိုးအစား	SEMI-AUTO License အမျိုးအစား	BGO-3N တန်ချိန်	2တန် နောက်ပေအရှည်	၁၀ပေ နောက...
Lks 210 လက်ရှိဈေးနှုန်း
Price $	210သိန်း Brand name	MITSUBISHI Model FUSO canter model year	2009 Engine အမျိုးအစား	4M42 turbo 3000cc Gear အမျိုးအစား	manual License အမျိုးအစား	MDY တန်ချိန်	2တန် နောက်ပေအရှည်	10 ပေ နော...
Lks 225 လက်ရှိဈေးနှုန်း
Price $	225သိန်း Brand name	MUTSUBISHI Model FUSO model year	2008 Engine 4M50 4800cc Gear အမျိုးအစား	Manual License MDY တန်ချိန်	2တန် နောက်ကန်အရှည်	10'ပေ နောက်ဘီး နောက်ဘီး နှစ်လုံးထမ်း Fuel...
Mitsubishi Fuso (BoxTruck, 12Wheels)	Price	-	510 L	FS54JVZ- , 2003Model, 12880CC, 12Wheels, 13.9 Tons, 406000KM	Car No. -	2N /…. (YGN)	*** ကိုယ်ပ...
မစ်ဆူဘီရှီ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ
မစ်ဆူဘီရှီ ဟာ ဂျပန် နိုင်ငံက အကြီးဆုံး မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီထဲက တစ်ခု အပါ အဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီက ကားပဲ ထုတ်တာ မဟုတ် ပါဘူး။ စက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ များအတွက် လိုအပ် တဲ့ အင်ဂျင် အမျိုးမျိုးက ကိုလည်း ထုတ်လုပ် ပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီ ကနေ ပါဂျဲရိုး တို့လို ကား များ က မြန်မာပြည် မှာ အတော် လေး ရေပန်းစား ပြီးတော့ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များလည်း သူ့နေရာ နဲ့ သူ ဝယ်ယူမှု များ ရှိနေ ပါတယ်။ ဒီတော့ အဝယ် များ၊ လူသိ များတဲ့ မစ်ဆူဘီရှီ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အချို့ ကိုပဲ ရွေးချယ် ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ်။
လူသိများ မစ်ဆူဘီရှီ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ
မစ်ဆူဘီရှိ ကန်တာ လို့ အမည်ရတဲ့ ကုန်တင်ကား တစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ အလတ်စား ကုန်တင်ယာဉ် ဖြစ်ပြီး သူ့ကို ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အတွက် ပိုမှာ ကြ ပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ နောက်တွဲကို အပေါ်မ၊ အောက်ချ လုပ်ပေးတဲ့ အင်ဂျင် စက် ပါဝင်ပြီးသား မို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ဆောက်လုပ်ရေး မှာ အသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေ ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၅၂၀၀ စီစီ ရှိပြီး ဒီဇယ် အင်ဂျင် သုံး ဆလင်ဒါ ၆ လုံးပူး အင်ဂျင် ကိုသာ အသုံးပြုထား ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် မော်ဒယ်၊ ၂၀၀၃ လောက်အထိ လည်း ဝင်ရောက် ပြီး တစ်ပတ်ရစ် ကားများ ပို လူသိများ ကြ ပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီ မီနီ ကပ် လို့ ခေါ်တဲ့ ထရက် အငယ်စား ကားလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၆၆၀ စီစီ သာ ရှိတဲ့ မီနီ ထရက်ကား ဖြစ်ပြီးတော့ အော်တို ဂီယာကို အသုံးပြုထား ပါတယ်။ မြို့တွင်း အိမ်ဆိုင် နဲ့ အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တို့မှာ အသုံးများ ပါတယ်။ ဈေးကလည်း သိန်း ၅၀ ကျော်နဲ့တင် ရနိုင်တဲ့ ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် တစ်မျိုး ကတော့ ဘတ်စ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ် လောင်စာ အသုံးပြုတဲ့ ဘတ်စ်ကား ဖြစ်ပြီးတော့ ခရီးဝေး အတွက်လည်း အသုံးပြုကြ သလို၊ မြို့တွင်း ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး တို့မှာလည်း အသုံးပြု ကြ ပါတယ်။ ကန်ဒါ Double Cab ဆိုရင် ရှေ့မှာ ခရီးသည် လေးဦး အတွက် ကျယ်ဝန်းတဲ့ နှစ်တွဲ ပါရှိ ပါတယ်။ ပြီးရင် နောက်မှာ ကုန်တင် ဖို့လည်း ပါရှိ ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၂၈၀၀ စီစီ အရွယ် ရှိပြီး ဆလင်ဒါ ၆ လုံးပူး ဗီ အင်ဂျင် ကို အသုံးပြုထား ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ လောင်စာ ကို အသုံးပြု တဲ့ ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင် မော်ဒယ် လောက် အထိလည်း မြင်တွေ့ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း အားဖြင့် လည်း သိန်း ၁၀၀ ကျော် ဝန်းကျင် နဲ့တောင် ရရှိ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြား လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ
မစ်ဆူဘီရှီမှာ အထက်ပါ ကားများ အပြင် ဒယ်လီကာ တို့လို ကားသန့်လည်း ရှိပါ သေးတယ်။ ဒါ့ အပြင် အရွယ် လတ်၊ အရွယ်သေး၊ အရွယ် ကြီး အခြားသော လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များစွာလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ အသစ် ကော အဟောင်း ကော ဝင်ရောက်ပြီး အများစုက တပတ်ရစ်ကား တွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ် ဝယ်လို သူများ အတွက် မှာပေးတဲ့ အေးဂျင့် များ ရှိသလို တစ်ပတ်ရစ် တွေကိုတော့ ဂျပန် လေလံ ကားဈေးကွက် ကနေ မှာယူလို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Motors.com.mm ကနေလည်း နစ်ဆန်း အမှတ်တံဆိပ် လုပ်ငန်းသုံ ယာဉ် ကား အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Mitsubishi မော်ဒယ်